Baro Xeerka Cusub ee Booliiska – HRC Somaliland
Xeerka Booliiska oo dhamaystiran halkan ku dhufo
Xeerka Booliiska Jamhuuriyadda Somaliland, Xeer Lr. 63/2013, waxa Golaha Wakiiladu ansixiyay 3 dii December 2017. Madaxwaynaha Somaliland wuxuu saxeexay 26/12/2017. Xeerka waxa lagu soo saaray Faafinta Rasmiga ah. Sidaas ayuu ku yahay xeer ka mid ah xeerarka dalka. Hadaba maadama oo uu xeerku aad muhiim ugu yahay ilaalinta xuquuqda dadka, waxaannu halkan ku soo gudbinaynaa qodobo ka mid ah xeerka. Qodobada halkan ku qorani waa kuwa ugu muhiimsan ee ilaalinaya dadwaynaha. Waxaa looga gol nahay in dadwaynuhu barto Xeerka oo wacyiga guud ee ku saabsan arimaha uu Xeerku ka hadlayo ay kor u kacdo. Ma aha qodobada halkani ku qoran dhamaan xeerkii oo dhan ee waa qodobo ka mid ah. Maadama oo xeerku wayn yahay oo aan qof waliba fursad u heli karin inuu wada akhriyo, qoraalkani wuxuu gacan ka gaysanayaa in si sahlan loo heli karo qodobada sida gaarka ah u khuseeye dadwaynaha.
Xeerka oo dhamaystiran halkan ka eeg
Waa maxaay ujeedada Xeerku?
Sida ku cad qodobka 3aad ujeedada Xeerku waa:
“In uu aasaaso qaab-dhismeedka, awooddaha iyo waajibaadka ciidanka Booliiska.
In uu sugo waajibaadka, xuquuqaha iyo masuuliyada xubnaha Booliiska ahaadaana kuwo sharciga ku salaysan.
In kor loo qaado Lana tayeeyo kartida Ciidanka Booliiska Somaliland iyo adeegyada bulsho ee ay Qaranka ugu xilsaaran yihiin.
In ciidanka booliska Somaliland loo tabbabaro, loona habeeyo qaab waafaqsan Shuruucda Dalka & tan caalimaga ah.”
Waa maxaay masuuliyadda guud ee Booliisku?
Qodobka 6aad ee Xeerku wuxuu sheegaya in Booliiska Somaliland ay masuul ka yihiin:
“Sugida amaanka Guddaha ee dhulka Jamhuuriyadda Somaliland
Ilaalinta Dastuurka iyo shuruucda Jamhuuriyadda Somaliland.”
Masuuliyadda sharci ee booliiska saaran hadii uu waxyeelo gaysto
“16(7). Ciidanka Booliisku xabad nool uma adeegsan karaan dad aan hubeysnayn haday dhacdona waxaa ka masuula cidda amarkaa bixisay.
16(8). Markasta oo ciidanka booliisku Hawl-gal fulinaayo sarkaalka Ciidanka wata oo keliya ayaa u xaq leh inuu la hadlo cidda hawsha lagu fulinayo.
16(9). Si xeerkan iyo xeerarka kale ee Dalka waafaqsan hadii hawlgalada ay Ciiddanka Boolisku fullinayaan ay ku keento dadwaynaha dhibaato keentay dhimasho, dhaawac, iyo burbur maaliyadeed marka la hubiyo baaxada dhibaatadu inta ay leegtahay waxaa waajib ah in loo gudbiyo Xumuuda JSL, si loo siiyo magdhow ciddii ay dhibaatadu ku dhacday.:
Maxaa Booliiska ka mamnuuc ah?
Qodobka 30aad ee Xeerku wuxuu sheegayaa inay Booliiska ka reeban tahay:
In aanay dan gaar u ah u adeegsan awoodooda iyo haybadooda booliisnimo.
In ay qabtaan shaqo kale oo ka duwan tan ciidanka inta ay ciidanka ka tirsan yihiin.
In aanay kala hor-iman hub ciidamada kale ee Qaranka, ciidanka booliiska dhexdiisa ama dadka rayidka ah, marka laga reebo xaaladaha sharcigu u ogolaaday.
Inay xubin ka noqdaan xisbi siyaasadeed ama urur Siyaasadeed.
Inay bixiyaan xog ama ka waranto xaalad ciidanku la kulmay ama xubintaasi la kulantay.
In ay aqbalaan hadiyad ama wixii lagu sharfo haday tahay mid si toos ah lagu siiyey ama cid kale loo soo mariyey.
Inay iscasilaadeeda soo gudbiso iyada oo lagu jiro xaalad dagaal, xaalad degdeg ah ama baadhisi ku socoto.
Faldembiyeedyada daran ee si cad xeerku u mamnuucay maxaay yihiin?
Qodobka 33aad ee Xeerku wuxuu sheegaa “waxaa ka reeban xubnaha ciidanka booliska:
Ma banaana fal dambiyeed kasta oo ka dhan ah bani aadanmimada sida jidh-dilka, Maskax ka dil iyo dhamaan faldambiyeedyada ku sifooba.
Xubin kasta oo booliis ah ee ku kacda faldambiyeedyada ku xusan faqrada 1aad ee qodobkan isaga ayaa ka masuul ah
Xubin kasta oobooliis ah oo ku sifawda farqada 1aad ee qodobkan waxaa lagu ciqaabayaa xadhig gaadhaya 5 ilaa 10 sanno.
Xagee loo marayaa cabashooyinka ka dhanka ah Booliiska?
Qodobka 34aad ee Xeerku wuxuu sheegayaa:
“Cabashooyinka ka dhanka ah Ciidanka Booliiska marka hore loo gudbinayo xafiisyada dabagalka iyo cabashooyinka Booliiska Somaliland (Internal Control/complaint Unit). Hadii xafiiskaasi waxba ka qaban waayo ama qofka cabanayaa ku qanci waayo waxa loo gudbinayo gudi cusub oo Xeerku aasaasayo oo la yidhaahdo guddiga madaxa banaan ee cabashooyinka ka dhanka ah ciidanka Booliiska (independent police complain commission). Gudidu waxaay ka kooban tahay:
Xubin Guddida nabadgelyada iyo Difaaca ee GolahaGuurtida (Gudd)
Xubin Guddida Arimaha Guddaha ee Golaha Wakiilada
Xubin Wasaarada Arimaha Guddaha (Xoghaye)
Xubin Sarkaal Booliiska ka tirsan/Khabiir booliis
2 Xubnood Qareeno madax banaan oo aqoon u leh Shuruucda Dalka
Xubin Gudidda Xuquuqal insaanka ah.”
Waa maxay awoodda Guddida Cabashooyinka Ka-dhanka ah Xubnaha Ciidanka Booliska?
Qodobka 36aad ee Xeerku wuxuu sheegayaa in awoodaha Gudida tahay:
Inay soo baadhaan markay helaan cabasho ka dhan ah Xubnin ama koox ka mid ah Ciidanka Booliiska waxaanay qaadayaan talaabooyinkan
Inay u yeedhaan dhinacyada (power to summon)
Inay dhegeystaan dacwada dhinacyadda
Waxay u xil saaran yihiin in ay talaabo ka qaadaan denbiyada ka dhanka ah xuquuqda aasaasiga ah ee Bani’aadanimo ee ku xusan xubinta 3aad ee Dastuurka
Inay go’aan ka soo saaraan dambiyada ku xusan farqada 2aad ee qodobkan go’aankooduna waxa uu ku ansaxayaa (2/3) tirada xubnaha cod bixinta leh
Muddada Xilkoodu waa saddex Sanadood.
Inay go’aankooda u gudbiyaan Xeer ilaalinta Guud si ay ugu soo oogto Dacwad xubintii booliiska ahayd ee fal denbiyeedka gashay.
Xeer Ilaaliyaha Guud waa in uu muddo todoba cisho gudahood ah ku oogaa dacwada.
Masuuliyadda Denbiga iyo Ciqaabtiisa
Qodobka 44aad ee Xeerku wuxuu sheegayaa in “denbiyada ay sida badheedhka uga galaan dadweynaha waxaa loo gudbinayaa maxkamadaha caadiga ah (Civilian courts), waxaana loo raacayaa Xeerka ciqaabta guud.”